मिस वर्ल्डको तयारीमा नम्रता, धादिङमा झोलुंगे पुल बनाउँदै
चको पहलमा धादिङस्थित नीलकण्ठ नगरपालिकामा झोलुङ्गे पुल निर्माण हुने भएको छ । ‘मिस वल्र्ड’मा नेपालको प्रतिनिधित्व गर्दै सहभागी हुने तयारीमा रहेकी श्रेष्ठको प्रतियोगिताको महत्वपूर्ण विधा मानिएको ‘ब्युटी विथ अ पर्पस’ का लागि उक्त पुल बनाउन लागिएको हो । केही दिन अ...
कंगनाको जन्मदिनमा ‘थलाइवी’ को ट्रेलर सार्वजनिक
१० चैत, झापा । बलिउड अभिनेत्री कंगना रनौत आज आफ्नो ३४ औं जन्मदिन मनाउँदैछिन्। उनको जन्मदिनको अवसरमा उनी स्टारर चलचित्र ‘थलाइवी’ को ट्रेलर सार्वजनिक हुँदैछ। उक्त चलचित्र तमिलनाडुकी पूर्वमुख्यमन्त्री स्व. जयललिताको बायोपिक हाृे। जसलाई ए. एल विजयले निर्देशन गरेका छन्। यो ...
दमक ५ जेठ–झापाली गायक निशान सिंखडाको नयाँ गीत सार्वजानिक भएको छ् । यस अघि डेराबासीबाट निकै चर्चामा आएका गायक सिंखडाको नयाँ गीतको म्युजिक भिडियो जिएम नेपाल मार्फत युट्युवमा सार्वजनिक गरिएको छ । सिंखडाले ‘खै कसले माया गरेर हो की’ बोलको नयाँ गीत ल्याएका हुन् । गीतमा प्रदीप प्रखर पोख...
बिर्तामाेड । पछिल्लो समय रंगमञ्चमा दर्शकको आकर्षण बढ्दै गइरहेका बेला पूर्वी नेपालको बिर्तामोडमा जिउँदो आकाश नामक नाटक मञ्चन हुने भएको छ । नाटक लाटीको छोरोको सफलतापछि निर्माण टिम आर्ट स्टुडियोले दोस्रो नाटक मञ्चन गर्न लागेको हो । नाटकले समाजमा तेस्रो लिङ्गीले ब्यहोर्नुपरेका समस्यालाई उतार...
काठमाडौ– गायककार रमेश अन्जान कडरियाको गित सार्वजनिक भएको छ । बहुमुखी प्रतिभाका धनी गायक कडरियाले ‘सँगै सँगै हिंडे पनि’ बोलको गित बजारमा ल्याएका हुन् । गितमा मणी भट्टराईको शब्द रहेको छ भने सुमन केसीको एरेन्ज रहेको छ । संगित भने गायक रमेश आफैंले गरेका छन् । मीठो ‘अरेन्ज&rsquo...
भोजपुर २७ फागुन । पाँचौ भोजपुर आइडल भोजपुर नगरपालिका –१० भैसीपंखाका जितेन राई भएका छन् । कटुन्जे युवा क्लब धोद्लेखानीद्वारा आयोजित पाँचौ भोजपुर आइडलको फाइनल चरणका १० प्रतियोगी मध्ये राईले उपाधि चुमेका हुन् । फाइनलमा गायक दिपक वान्तावा र कला राईको निर्णय तथा भोटिङका...
चलचित्र मंगलम टिम झापामा,
दमक । नयाँ र पुरानो कलाकारलाई एकैसाथ लिएर छविराज ओझाले निर्माण गरेको चलचित्र मंगलम चाँडै देशैभर प्रदर्शन हुने भएको छ । निर्माता ओझाले चलचित्र मंगलम यहि फागुन २५ गतेदेखि देशभरका हलहरुमा एकै साथ प्रर्दशनमा आउन लागेको जानकारी दिएका छन् । चलचित्रको निर्माण पक्षले आज दमकमा पत्रकार सम्मेलन गरि चलचि...
दमक । भुपेन्द्र तुम्बाहाम्फेको निर्देशनमा ओम प्रकाश राईको शब्द तथा संगीत रहेकोे लोकपप गीत ‘कोदो फल्ने’को मोरङको मिक्लाजुङमा छायाकंन गरिएको छ । मिक्लाजुङ स्थित टाँडीको विभिन्न रमणीय स्थानहरुमा छायाकंन गरिएको उक्त गीतमा गायक सक्थिम योङयाको स्वरमा रहेको छ । उक्त गीतको म्युजिक भिडियोमा...
“बाँचुन्जेली जिन्दगी” को छायाकंन सकियो
दमक, गायक तिर्थराज राईको शब्द संगीत र स्वर रहेको नेपाली आधुनिक गीत “बाँचुन्जेली जिन्दगी” को छायाकंन सकिएको छ । यो गीतमा गायक राईलाई सम्झना ओलीले स्वरमा साथ दिएकी छन् । पारिवारीक कथाबस्तुमा तयार गरिएको उक्त गीतको म्युजिक भिडियोको छायाकंन दमक आसपासका क्षेत्रहरुमा गरिएको छ । ...
ईकु’को नामले चर्चित सुलेमान शंकरको प्रस्तुतीमा निर्माण भएका चलचित्र ‘फिर्के’को पहिलो गीत सार्वजनिक भएको छ । ‘चट्टै’ बोलको गीतमा रामचन्द्र काफ्ले र अञ्जु पन्तको स्वर छ भने सुबाष भुषालको संगीत तथा लेखु सहयात्रीका शब्द छन् । गीतको भिडियोमा सुलेमान शंकर ’ईकु’ र ...